ओलीले चाहे दिनहुँ भ्रष्टाचार खुल्छ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहने हो र सुशासन दिनै खोजेको हो भने हरेक दिन भ्रष्टाचारको पोल खुल्नेछ । पेण्डाराको बाकसजस्तो छ नेपालको भ्रष्टाचार । राज्यका जुनसुकै तहमा पनि भ्रष्टाचार छ । प्रधानमन्त्री भन्छन्– विदेश जाँदा लाज लाग्छ । लाज लाग्ने हो भने र आफूले भ्रष्टाचारीलाई टपाटप टिपेर फाल्छु भनेको वचन पूरा गर्ने हो भने ओलीले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्छन् ।
केपी ओलीले बिर्सनै नहुने सत्य के हो भने दोश्रो पल्ट पार्टी अध्यक्ष र तेश्रोपलट प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै सम्भाबना बाँकी छैन । पार्टीभित्र र देशव्यापी रुपमा केपी ओलीको यो एकवर्षे शासनकाल यति अलोकप्रिय रहेको छ कि अव ओलीको राजनीतिक भविष्य यत्ति नै हो भन्न सकिन्छ ।
शायद ओलीले भ्रष्टाचारको महाभारत देखेका छन्, भोगेका छन् र कारवाही नगर्न बिबस छन् । यही बिबसताका कारण प्रम ओलीले भनेको हुनुपर्छ– अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान लाज हुने गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा गतहप्ता प्रम ओलीले मुखै फोरेर भनेका हुन्– भ्रष्टाचार उच्च श्रेणीमा हुने गरेको छ । सुशासनमा जोड दिएर विकास निर्माणका कामलाई सक्रिय पार्न नसकेको ग्लानीबोध थियो ओलीको मुहारमा । प्रम ओलीले जुन जुन जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास आर्जन हुने गरी काम गरेनन्, तिनीहरुले फेरि जनप्रतिनिधि हुन पाउने अवसर गुमाउन थालेका छन् । हुन त यो सचेत गराएको हो । प्रधानमन्त्रीको काम भ्रष्टाचार हेर्ने र सचेत गराउने होइन, दण्ड र पुरस्कारमा लाग्नुपर्ने थियो ।
यही मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले विप्लव समूहले आतंककारी र ध्वंसात्मक क्रियाकलपा गरेकाले कानुनी कारवाही गर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका थिए । स्मरणी के छ भने फ्रचण्ड माओवादी र स्वयम् ओलीले मान्छे काट्दा क्रान्ति हुन्, विद्रोह हुने अनि नेत्रवित्रम चन्दले राज्यलाई कर नतिर्नेलाई जनकारवाही गरिन्छ भन्दा कानुन लाग्ने, ओलीको यो दोहोरो मापदण्ड किन ? देशको प्रधानमन्त्रीले विप्लव माओवादीलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान पहिल्याउन सक्नुपर्थ्यो । सीके राउतजस्ता देशघातक तत्वसँग सहमति हुनसक्ने, अन्य समूहसँग वार्ता नै नगर्ने ? के हो सरकारको चाला ?
उनले आतंककारी, ध्वंसात्मक गतिविधि संचालन गरिरहेकाले विप्ल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई कानुनी कार्वाही गर्ने निर्णय लिएको स्पष्ट पारेका छन् ।